Intel inozopa 50% yeLTE machipisi eiyo iPhone 7 | IPhone nhau
Intel inopa 50% yeLTE machipisi eiyo iPhone 7
Vhiki rega rega isu tine matsva matsva ane chekuita neramangwana iPhone 7, nezve magadzirirwo ayo, nezve ramangwana remukati maitiro asi tiri kuonawo kwakasiyana pfungwa dzekuti yegumi vhezheni yeIOS ingave iri, vhezheni ichaburitswa zviri pamutemo mune isingasviki mwedzi pamusangano weApple wekuvandudza.
Iye zvino iye anogadzira LTE machipisi eazvino iPhone mamodheru ndiQualcomm, asi sekukuzivisai kwatakaita mavhiki mashoma apfuura, iyo femu yakanga yarasa chibvumirano neApple yechizvarwa chinotevera che iPhone ne iPad neiyi nharembozha yekutaurirana.
Sezvakataurwa naDigiTimes, Intel ichave mutengesi we50% yeanotevera LTE machipisi, Yakagadzirwa neTSMC neKYEC, yeiyo inotevera iPhone 7 uye iPad ine nharembozha, inozosvika pamusika unotevera Gunyana.
Sezvo isu tichigona kuverenga muDigiTimes
Intel ichagadzira machipisi matsva ekutaurirana eiPhones nyowani uye ichashandisa vagadziri Taiwan Semiconductor Kugadzira Kambani (TSMC) uye King Yuan Electronics (KYEC) pakugadzira kwavo, sekureva kwazvino sosi dzakasimbisa iyi nhau.
Runyerekupe rwekutanga nezve shanduko yemugadziri weLTE machipisi eiyo iPhone yakatanga kubuda pakati pegore rapfuura, mairi makuhwa kuti Qualcomm yakanga iine angangoita ese mavhoti ekurasikirwa neakasarudzika mukugadzirwa kweLTE machipisi yeApple, nhau dzakazopedzisira dzasimbiswa, maringe nerunyerekupe rwazvino, chatisina kuziva ndechekuti ndiani angave wekupedzisira kugadzira machipisi matsva, kunyangwe zvaifungidzirwa kuti inogona kuve Intel.
Rinopfuura mwedzi wapfuura, takakuzivisa nezve kubhadharwa kwevashandi vanopfuura chiuru neIntel kuti ushande chete mukugadzirwa kweiyo LTE 7360 chip, chip chichava chinokurumidza zvikuru kubvumira ruzivo kuti rudhanirwe nekumhanyisa inosvika mazana mana emaMbps, uploads anosvika zana Mbps mukuwedzera pakupa rutsigiro rwezvikamu 100 ne10 zvezvikwata zveLTE zvazvino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Intel inopa 50% yeLTE machipisi eiyo iPhone 7
Iye zvino tinogona kutarisa mavhidhiyo eVR kubva kuYouTube pane iyo iPhone
Martin Hajek anotiratidza iyo nyowani iPhone 7 uye 7 Plus